Tantaran'ny orinasa - Fujian Bridge Style furnishings Co., Ltd.
Fujian Bridge Style furnishings Co., Ltd. dia mpamatsy vokatra BAMBOO sy mpanjifa WOOD mifantoka amin'ny vokatra avy amin'ny Birao fanapahana hazo sy hazo, mpikarakara vatosoa bambu, birao fromazy bambao charcuterie sns. Amerika Avaratra sy Eropa. Taorian'ny fampandrosoana nandritra ny folo taona, ny orinasany feno dia mandrakotra 15000 metatra toradroa ary voamarina miaraka amin'ny BSCI, FSC, ISO9001.
Nandritra ny folo taona lasa, ny rafitra fanaraha-maso kalitao henjana sy serivisy faran'izay tsara dia ahafahan'ny Fujian Bridge Style furnishings Co., Ltd. hanompo ny mpivarotra mihoatra ny 1000 Amazon ary hitazona fiaraha-miasa maharitra sy mahasoa.
Fampivoarana sy fanavaozana tsy tapaka, Fujian Bridge Style furnishings Co., Ltd. dia lasa mpamatsy volomparasy sy hazo vita amin'ny vokatra malaza sy azo antoka any Shina.
Nandritra izay 10 taona lasa izay, ny rafitra fanaraha-maso kalitao henjana sy serivisy faran'izay tsara dia mamela ny Fujian Bridge Style furnishing Co., Ltd hanompo ny mpivarotra mihoatra ny 1000 Amazon ary hitazona fiaraha-miasa maharitra sy mahasoa.
Fampirantiana Hong Kong 2016
Fampirantiana Hong Kong 2017
Fampirantiana Hong Kong